Ozi obi ụtọ maka ndị na-azụ ahịa bọs na Sakarya - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara54 SakaryaOzi obi uto diri ndi ahia ahia ahia nke obodo na Sakarya
11 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Mpaghara Marmara, Turkey 0
Sakaryada ọha bọs trades ozi obi ụtọ
Na June, 2019 na-aga n'ihu na-enye nkwado azụmaahịa nke bọs ọha maka onwe onye maka kwa ọnwa maka njem na-akwụghị ụgwọ. N'ọnọdụ a, e debere nkwado 690 puku TL na akaụntụ nke azụmaahịa.
Nkwado ego mmefu kwa ọnwa nke Sakarya mepere emepe na ngalaba nke Transportgbọ njem Ọha na - ebugharị maka ndị na - azụ ahịa Ọha na - akwụghị ụgwọ maka njem na - aga n'ihu. N'ọnọdụ a, ugwo 2019 June abanyela na akaụntụ nke ndị na-esepụta na-ekwupụta Transportlọ Ọrụ Transportgbọ njem Ọha na Ọha “Ntugharị Ọgba Ọha nke Onwe Onye na-ebugharị maka njem gaa 2019 June na-ekpuchi ọnwa nke 690 puku ịkwụ ụgwọ. E ji chioma ”mee ihe.
Ozi Obi Ụtọ na Sakarya Public Bus 21 / 04 / 2017 Sakarya Public Bus Busters News Ọhụrụ: Sakarya Metropolitan Municipality Transportation Department President Fatih Pistil, Private Public Bus na-azụ ahịa kwuru na ego kwa ọnwa nkwado ego maka njem n'efu na-aga n'ihu. Pistil kwuru, a kwụrụ ụgwọ Ocak 2017 Million 1 puku TL maka January, February na March nke 167 na ọrụ nkwado anyị. Ogologo. " Sakarya Metropolitan Municipality Department of Transportation Fatih Pistil, Onwe Public Bus trades na nloghachi maka free njem kwa ọnwa ego ịkwụ ụgwọ mara ọkwa na-aga n'ihu. Fatih Pistil kwuru, aylık Ụgwọ ịkwụ ụgwọ ego ọnwa ọ bụla na ndị ọrụ ụgbọ mmiri nke onwe anyị na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Na nke a ...
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè ọha na eze na akụkọ Sakarya 14 / 02 / 2017 Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè Sakarya kwupụtara ozi ọma: Sakarya Metropolitan Municipality Department Transportation Department President Fatih Pistil, Private Public Bus trades kwupụtara na ego ọnwa ịkwụ ụgwọ ego maka njem n'efu na-aga n'ihu. Pistil kwuru, sị, "533 puku pound nke nkwado ahịa maka September na October. Ogologo. " Sakarya Metropolitan Municipality Department of Transportation Fatih Pistil, Onwe Public Bus trades na nloghachi maka free njem kwa ọnwa ego ịkwụ ụgwọ mara ọkwa na-aga n'ihu. Pistil, bụ onye mere nkọwa banyere isiokwu ahụ, kwuru, aylık Ụgwọ ịkwụ ụgwọ ego ọnwa ọ bụla maka njem ọha na eze na-aga n'ihu na ndị ọrụ ụgbọelu nke onwe anyị. Na nke a ...
Asambodo Nweta Access maka Bus Public Bus 31 / 10 / 2017 Arifiye na Sapanca Ndịọrụ Ọha Mmadụ, nke na-eme ka ụgbọ ala ha dabara maka ndị nwere nkwarụ, nyere akwụkwọ ikike Accessibility site na Metropolitan Municipality Transportation Department. Pistil, "Ana m ekele gị maka ọmịiko a na nke ndị ahịa anyị gosipụtara". Sakiya Metropolitan Municipality Department Transportation Department site Arifiye na Sapanca Ụlọọrụ Ọha Mmadụ, bụ nke na-eme ka ụgbọala ndị kwesịrị ekwesị maka akwụkwọ ikike accessibility nke ndị nwere nkwarụ nyere. N'ime akwukwọ a, Fatih Pistil, Ngalaba Ụgbọ njem, Davut Yüce, Isi nke Ngalaba Na-ahụ Maka Nlekọta Mmadụ, Mutlu Işıksu, Onye isi na-ahụ maka Ọmụmụ Ezinụlọ na nke Ahịa na ndị nwe ụgbọala nwere akụkụ. Fatih Pistil, Isi nke Ngalaba Ụgbọ njem,
Onye ahia ahia na-agwụ, ndị ọrụ nkà Yenisehir na-agbaji 11 / 07 / 2016 Tram Shopkeepers gụchara, Akdeniz emikpu trades: Izmit Yahya Kaptan, Akdeniz na Mehmet Ali Pasha, otú na-ekwu okwu n'ihi na nke na-aga n'ihu tram na-arụ ọrụ Mahal "omenkà bleeds" n'ihi na a mgbe na Izmit kasị agbawa usoro nke na-aga n'ihu tram arụ ọrụ Akdeniz na Mehmet Ali Ndị ahịa Pasha na-ebi ndụ. Enweghị ike ịhụ ibu ga-enwe olileanya na, ma na-ele anya na-arụ ọrụ na-abịa nke Ramadan hapụrụ Yenişehir nkeji iri na ise na Mehmet Ali Pasha kwụsịrị ndụ nke Mustafa Kemal Boulevard tinyere agbata ha fọrọ nke nta ntịme n'ihi na ha nwere ike, ya mere ọrụ. A na-egosiputa okporo ámá na asụsụ ndị ahịa nke mkparịta ụka a, dị ka ndị Siria. Ebe a dị na IZMIT BU
Tram na ụgbọ okporo ígwè na-aga na Bursa 22 / 04 / 2014 Na Bursa, tram na ụgbọ okporo ígwè na-ejikọta: Na Bursa, nkwekọrịta nke tram na bọs ahụ wetara ha n'ọnụ ha. Ndị njem ụgbọ ala na bọs na-anwụghị n'ihe mberede ahụ. Ihe mberede ahụ mere na Ataturk Street. 16 M Ụgbọ ala ọha na eze na ntanetị 00348 abanyela nkwụsị ụgbọ ala maka ịkwanye na ndị na-ebugharị ndị njem. Mgbe ahụ ụgbọ ala ahụ chọrọ ịga n'okporo ụzọ ahụ, soro Silkworm soro otu ụzọ. N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị onye gburu ma ọ bụ merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ. Ndị njem hụrụ na tram na bọs nwere oké ụjọ. Ndị uweojii na-enyocha ihe mberede ahụ.
9 merụrụ ahụ kụrụ ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè 09 / 12 / 2014 Ụgbọ bọmbụ na-eme ka ụgbọ okporo ígwè 9 merụrụ ahụ: Niğde-Nevşehir nkwụsị okporo ụzọ nke bọs nke ọha na-ahụ ụgbọ okporo ígwè nke 9 merụrụ ahụ. N'uzo okporo ụzọ nke Niğde-Nevşehir nke ụgbọ okporo ígwè nke na-achọ ịkwa ụgbọ okporo ígwè ahụ na nlekota ụgbọ okporo ígwè n'ihi ngwakọta nke ndị 9 merụrụ ahụ. Dị ka ihe ọmụma nke e nwetara n'ụtụtụ si n'obodo Yıldıztepe Niğde na-ebu ndị njem Ş.Y. 51 HU 529-efere ụgbọ ala ọha na eze n'okpuru nlekọta nke nkwụgharị okporo ụzọ Niğde-Nevşehir jikọtara ụgbọ okporo ígwè. HG (18), AA (32), Ş.D. (56), RA (31), MK ...
BURULAŞ na-enye ọzụzụ maka ndị ọrụ ọkwọ ụgbọ ala 31 / 03 / 2015 BURULAŞ na-enye ọzụzụ na ndị ọrụ ụgbọelu nke onwe ha: A na-achọ ịbawanye ọrụ ọrụ na njem ụgbọ njem ọha na eze site na ịzụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ọha na eze na-arụ ọrụ na BURULAŞ na Bursa Private Public Busers Chamber. Usoro ị na-aga n'ihu ụbọchị ise n'izu iji mee ka àgwà ọrụ dị elu ma nye ụkpụrụ nkịtị na bọs ọha na eze, ndị nwere ebe dị mkpa na njem Bursa obodo. Na ọzụzụ nke Uğur Koç, Ndị Ọzụzụ Ọzụzụ Na-ahụ Maka Ọdịmma Ọha, isiokwu ndị dị ka Management Image, Nkwurịta Okwu Ndị njem na Omume, Nchịkwa Iwe na Nsogbu na okporo ụzọ, Ụgbọ njem na-elekọta mmadụ, Ọrụ na Social Life Balance na-edozi na ụzọ mmekọrịta.
Ọfụma nke ndị mmadụ na Tram na Eskişehir gbara 1 ahụhụ (Video) 14 / 03 / 2016 Ndị na-tram Bus ikukota na Eskişehir bụ 1 merụrụ ahụ Ray exiting na tram azụ na egwu na pụrụ isi chọta ọrụ na a mberede okporo ụzọ na Eskisehir, bọs na trams si nkọwa, na nkukota nkeonwe bọs na trams 1 ndị mmadụ merụrụ ahụ. Nkọwa nke nkwụsị ụgbọ ala na tram Na Eskişehir, 1 merụrụ ahụ n'ihi nkwekọrịta nke tram na ụgbọ ala ọha na eze. Dị ka ozi natara, Ekrem Y. (63) duru 26 0039 efere pụrụ iche ọha ụgbọ ala H, District Gökmeydan Sivrihisar 2 Street n'ọdụ ụgbọ ala na Junction kasị pụta ìhè Iye. Mahadum Osmangazi-Otogar site na tram nke kwadoro njem ahụ. Na mberede, Dudu B. (58) merụrụ ahụ dịka onye njem na bọs
Public Bus Driver Stops Driver 27 / 09 / 2016 Onye ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ na-aga n'ihu na-enweghị nkwụsịtụ: Onye ọkwọ ụgbọ ala ọha na eze gbanwere okporo ụzọ n'ihi ọrụ tram na-arụ ọrụ na district Izmit nke Kocaeli ka onye njem ahụ na-emezughị ọchịchọ maka nkwụsị bọs na-apụ. Obodo Izmit nke Kocaeli, onye na-akwọ ụgbọelu nke gbanwere okporo ụzọ n'ihi ọrụ ọrụ tram, ndị njem na-adịghị emezu arịrịọ ahụ ka ha banye n'èzí. Dị ka ozi natara, 41 J 0488 plate nke onye ọkwọ ụgbọala ọha na eze bụ Sezer Y, ọrụ nchịkọta tram n'ihi ụzọ gbanwere agbanwe wee banye Yenisehir Mahallesi Arda Street Pasa Street. Mgbe ọkwọ ụgbọ ala Sezer Y emeghị ihe a nke Osman S, otu n'ime ndị njem ahụ chọrọ ịpụ na ọdụ ụgbọ ahụ, nkwurịta okwu tartışma
Ejirila Ogwe Akaụntụ Ọha Mmadụ Ọha Na Na Na Bursa 15 / 12 / 2016 Bursa PrivateNumber ọtụtụ mmadụ ndị a ma ama maka mgbuchapụ nke gburugburu ebe obibi site na-ere ọkụ ma na-ewute ndị njem ahụ na-ejikarị mkparị ọha na eze ahụ! N'ihi nsogbu ndị dị na sistemụ kaadị BURULAŞ'la bọs na-acha akwụkwọ ndụ na-adabere na mmebi nke nkwekọrịta "Ụgbọ a bụ ego dị mma," dere na usoro. BURULAŞ'dan Bursalılar kwa ọnwa na-etinye aka na ya, ụmụ amaala a na-akpọ Altay'yi Bursa Metropolitan Mayor Recep Altepe'yi. Ụgbọ ala ọha na eze na-ebugharị amaghị iwu ahụ ọzọ! Akwukwo 10 a ma ama maka oke oku na igbu mmadu gburugburu ebe obibi, o bu kwa ihe puru iche nke ndi ozo na-akuko
Ndị Ahịa Buslọ Ahịa Ọhaneze
Ozi Obi Ụtọ na Sakarya Public Bus
Ndị ọrụ ụgbọ okporo ígwè ọha na eze na akụkọ Sakarya
Onye ahia ahia na-agwụ, ndị ọrụ nkà Yenisehir na-agbaji
Tram na ụgbọ okporo ígwè na-aga na Bursa
9 merụrụ ahụ kụrụ ụgbọ okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè
Ọfụma nke ndị mmadụ na Tram na Eskişehir gbara 1 ahụhụ (Video)
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (242) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (619) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (518) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (665) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (827) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (734) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)